नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : चीनको कोरोना भाईरस अति प्रभाबित क्षेत्र हुवेइमा उध्दार नपाएर छटपटिएका एकसय पचास नेपालीहरुलाई सोध्नुहोस देश भेट्टियो त ??
चीनको कोरोना भाईरस अति प्रभाबित क्षेत्र हुवेइमा उध्दार नपाएर छटपटिएका एकसय पचास नेपालीहरुलाई सोध्नुहोस देश भेट्टियो त ??
"देश हराएको मान्छे" यो कविता सँग्रह प्रकाशन गर्दा मलाई केही मान्छेहरुले देश पनि कहीं हराउँछ र ? मान्छे पो हराउँछन भनेर सुझाउँथे । देश कहाँ छ ?? के देश भेटिएको भए यस्तै हुन्थ्यो ?? चीनको कोरोना भाईरस अति प्रभाबित क्षेत्र हुवेइमा उध्दार नपाएर छटपटिएका देश हराएको मान्छे डा. बिकास न्यौपाने सहितका एकसय पचास नेपालीहरु लाई सोध्नुहोस देश भेट्टियो त ?? भनेर । उनिहरु बुझ्छन मेरो कविता सँग्रह "देश हराएको मान्छे" को पिँडा र मर्म । फेरी पनि प्रिय गायक भाई राज सिग्देलको शब्द सापटी लिएर भन्छु " यो देश देश होइन, बजार हो !"